I-KWI: I-CRM ehlanganisiwe, i-POS, i-Ecommerce kanye ne-Merchandising yabathengisi abakhethekile | Martech Zone
The Ipulatifomu ye-KWI Ehlanganisiwe Yezokuhweba yisisombululo esisekelwe efwini, sokuphela kokuphela sabathengisi abakhethekile. Isixazululo se-KWI, esifaka phakathi i-POS, Merchandising, ne-eCommerce sinikwe amandla kusuka kudathabheyisi eyodwa, okunikeza abathengisi ulwazi olungenamthungo ngokuphelele, lwesiteshi se-omni.
Ipulatifomu ye-KWI Ehlanganisiwe Yezokuhweba
Ukuphathwa Kwobudlelwane Nabathengi (CRM) - qoqa idatha eduze nesikhathi sangempela, ngakho-ke zonke iziteshi zakho zinolwazi olusesikhathini. Abalingani bezentengiso bangabona isimo se-VIP, imicimbi ekhethekile enjengezinsuku zokuzalwa, imigubho nezinye izinto ezibangela, ezigqanyiswe ku-POS ukuze zibandakanye kalula ikhasimende. Inhlanzeko yemininingwane yansuku zonke nokususwa kokukopela kuqinisekisa ukunemba okuqhubekayo.
Indawo Yokuthengisa (POS) - Ngaphakathi kokuthengiselana okukodwa, abangane bakho bokuthengisa banekhono lokukhala ngokuthengisa, ukubuyisa, ama-oda akhethekile, ukuthumela ukuthengisa futhi imikhiqizo ethunyelwe ivela kwezinye izindawo. Kungamandla wokuletha insizakalo yamakhasimende ehlukile, entendeni yesandla sakho.
Ukudayiswa kwempahla - Finyelela ukutholakala kwesikhathi sangempela kwezentengiso kanye ne-inventory ukuze ube nokuqonda okufika kumzuzu ngokwenzekayo ngebhizinisi lakho. Zonke izixazululo ze-KWI zivela emthonjeni owodwa wedatha. Ukusetha kwakho okuphelele kwedatha kugcinwa unaphakade ezingeni lento, futhi kungasesheka ngokuphelele ngamazinga angama-23 okulandelana okutholakalayo
eCommerce - Wonke amakhono owadingayo, enziwa ngokukhululekile kuwo wonke amapulatifomu. Ayikho idatha ethunyelwe, okuholela kuzici ezinjengekhono lokushiya inqola eku-inthanethi zivele kumadivayisi wakho we-Cloud 9 POS.
Ukuvimbela Ukulahlekelwa - Vikela ibhizinisi lakho, kanye nomugqa wakho ophansi, ngokuhlukaniswa kwethu kwezinsizakalo zokuvimbela ukulahleka, Iqembu leZellman. I-Zellman Group iyinkampani yokuvikela ukulahleka kanye nenkampani yokubonisana kanye nomholi owaziwayo ezinsizakalweni zokubuyiselwa kwezidingo zomphakathi nokubuyiselwa.
Zonke izixazululo ze-KWI ezisuselwa emafini, kufaka phakathi i-KWI Cloud 9 POS (uhlelo lokusebenza lwendabuko lwe-iOS w / MDM; ilungelo lobunikazi), i-KWI Merchandising System (esuselwe kusiphequluli), kanye ne-KWI CRM System yakhiwe kusichazamazwi sedatha esisodwa.
Lokhu kwenza abathengisi bakwazi ukwenza izinqumo ezinolwazi oluningi nge Ukubukwa kwamakhasimende okungu-360 ° nokubika okuthuthukisiwe, okususelwa kuyo yonke idatha yakho, hhayi nje izingxenye zayo.
Tags: 360 degreeCRMukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeezokuhweba ngekhompyuthaplatform ecommercekwikwizohweboukuvimbela ukulahlekamerchandisingipulatifomu yokuthengisaisiteshi se-omniPOSukuhweba okuhlangenei-ecommerce ebumbene